सिटीका ग्वार्डिओला एलएमए वर्ष उत्कृष्ट फुटबल प्रशिक्षक घोषित, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सिटीका ग्वार्डिओला एलएमए वर्ष उत्कृष्ट फुटबल प्रशिक्षक घोषित
एजेन्सी । म्यानचेस्टर सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओला वर्ष उत्कृष्ट फुटबल प्रशिक्षक घोषित भएका छन् । ग्वार्डिओलाले यस सिजन म्यानचेस्टर सिटीलाई प्रिमियर लिग उपाधि दिलाएका छन् ।
उनलाई लिग म्यानेजर्स एसोसियसनले वर्षको उत्कृष्ट प्रशिक्षक पुरस्कारबाट सम्मान गरेको हो । यस सिजन ग्वार्डिओलाको प्रशिक्षणमा सिटीले प्रिमियर लिगमा आफ्नो टोलीलाई उत्कृष्ट प्रदर्शन गराए ।
उनको टोली सिटीले प्रिमियर लिग इतिहासमै सबैभन्दा धेरै अंक एक सय बनायो भने ३८ खेलमा १ सय ६ गोल पुरा ग¥यो । सिटीले यस सिजन आर्सनललाई ३–० ले पराजितगर्दै लिग कपको उपाधि पनि हात पा¥यो ।
स्पेनिस बार्सिलोना र जर्मन बायन म्युनिखका पूर्व प्रशिक्षक ग्वार्डिओलाले उत्कृष्ट प्रशिक्षकका उपाधिमा अन्य पाँच प्रशिक्षकलाई पछि पारे । उनले लिभरपुलका जुर्गेन क्लोप, बर्नलीका सिन डेच, उल्भ्सका नुनो इस्पाइरिटो सान्तोस, कार्डिफका निल वानोक र एस्रिङ टोनका स्टानली जोन कोलमेनलाई पछिपार्दै उपाधि हात पारेका हुन् ।